Otu n'ime ọtụtụ ihe mere anyị na-otú ọchịchọ anyị Ngwa na nkà na ụzụ bụ eziokwu na ha na-arịgoro ka elu na a mma larịị on a kwa ụbọchị. The isi nchegbu na ndị a na ngwaọrụ bụghị arụmọrụ n'ihi na mgbe ọ na-abịa na-akpụ akpụ site na otu n'elu ikpo okwu ọzọ ihe mbụ anyị nwere ike na-eche nke bụ ma ikpo okwu anyị na-akpụ akpụ na ala iji n'ezie na-adabere ma ọ bụ.
Nkà na ụzụ na Ngwa eruwo a ebe ọ dịghị onye ga na-atụ anya ya ka ọ bụrụ afọ ole na ole azụ, Otú ọ dị eziokwu ka na-anọgide na ha na-meere ezu iji hụ 100% nche nke gị data na faịlụ. N'ihi na n'elu-abịa nsogbu a anyị na-eme backups, ma ọtụtụ ndị anọwo na-eche ihu mbipụta na nkwado ndabere na mpaghara nsogbu, nke a na tagged dị ka "iTunes ndabere Oge na-emezughị." Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị, mgbe ahụ, i rutere na-nri ebe n'ihi isiokwu a ga-achọpụta na ihe ngwọta na-nsogbu a.
Mkpa nke Backups
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Ngwa, mgbe ahụ, ị ​​ga-maa-ekweta na m ma ọ bụrụ na m kwuru, sị backups ndị kasị mma na nke kasị oru oma ụzọ nke huu nchekwa nke gị data. Hardware ọdịda bụ ejighị n'aka ruo n'ókè ha nwere ike ejedebe oké nsogbu n'ihi na onye ọrụ. Adịghị enye gị data a ohere ga-ehichapụ ọ bụ furu efu ma hụ na ị na-eme mgbe nile backups nke ngwaọrụ gị na gị data.
Ọzọ mere nke na-edebe backups bụ na ị nwere ike iweghachi niile data n'ime ọhụrụ ekwentị ma ọ bụrụ na ị na mgbe ida ekwentị gị site na ohere ọ bụla ma ọ bụ kpebie iji kwalite ekwentị gị, irrespective nke ihe kpatara ya.
Ngwọta 1: Naghachi data site na otu agadi iTunes ndabere
iTunes bụ nnọọ ezi ma dị irè software na-ejizi niile gị ndabere akụkọ ihe mere eme, ma mgbe ụfọdụ ọ na-akawanye umengwụ na-na oge Ọ na-enye njehie nke pụrụ ịbụ ezigbo ihe mgbu. Otú ọ dị, e nwere ọzọ software site na nke i nwere ike ina gị data natara site iTunes site na-eso nanị ole na ole dị mfe nzọụkwụ, onye dị otú ahụ software bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS.
Ihe kacha mma banyere Wondershare Dr.Fone maka iOS bụ na ọ bụghị nanị kpọmkwem ka otu ọrụ, kama ọ pụrụ inyere gị na ihe ọ bụla na ihe niile dị metụtara iOS nkwado ndabere na mpaghara weghachite. Na-esonụ bụ nzọụkwụ ị ga-eso iji naghachi data si a gara aga iTunes ndabere.
Nzọụkwụ 1: Wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS
Nwụnye usoro bụ nnọọ mfe ma onwe onye na-eduzi nwụnye usoro ga-adị mfe na-software arụnyere jidesie gị PC. Nanị onyeisi Wondershare Dr.Fone maka iOS
Nzọụkwụ 2: Họrọ Iweghachite ọnọdụ
Mgbe wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS ị ga-enwe ike ịhọrọ site ọtụtụ nhọrọ, na nke a anyị ga-ọtụtụ "naputa site na iTunes ndabere File" n'ihi na ọ bụ ihe anyị chọrọ ime.
Nzọụkwụ 3: Iṅomi Data si ndabere File
Họrọ iTunes ndabere faịlụ na ị chọrọ iji naghachi n'aka site na ịpị n'elu "Họrọ" button. Otu ị họrọ nri ndabere faịlụ mkpa ka ị pịa "Malite iṅomi".
Nzọụkwụ 4: Ele Files na-agbake site iTunes ndabere
Ozugbo scanning bụ zuru ezu, ị ga-kpaliri na a ihuenyo ebe ị nwere ike họrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi. Mgbe ị na-ahọrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi, pịa "Naghachi" Nke a ga-akpali abụọ mgbake nhọrọ nke ma ị chọrọ iji naghachi gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụ gị na kọmputa.
Mgbe na-ahọpụta nwoke nhọrọ, ị ga-eme n'ime oge.
Nhọrọ 2: Iji ukara ngwọta si Apple
Nzọụkwụ 1: Malitegharịa ekwentị gị na PC na ngwaọrụ iOS
Ozugbo ị Malitegharịa ekwentị ma nke ngwaọrụ, ebute nkwado ndabere na mpaghara otu ugboro ọzọ.
Nzọụkwụ 2: Kwụpụ ọ bụla ọzọ USB ngwaọrụ
Mgbe ụfọdụ ndị ga-egbo nsogbu site mgbagwoju niile USB ngwaọrụ na jikọọ na gị PC, ma e wezụga n'ihi keyboard, òké na iOS ngwaọrụ. Mgbe n'ịhụ na e nweghị ngwaọrụ ndị ọzọ, na-amalite nkwado ndabere na mpaghara ọzọ.
Nzọụkwụ 3: Lelee gị Windows Security Nhọrọ
Windows abịa na a wuru na-firewall na mgbochi virus software, biko jide n'aka na nche software bụ nkwarụ ma na-agbalị akwado ọzọ.
Nzọụkwụ 4: Tọgharia Lockdown nchekwa
Biko jide n'aka na lockdown nchekwa e tọgharịa tupu ị na-agbalị ọzọ ndabere na iji iTunes.
Nzọụkwụ 5: Free Nchekwa
Abụkarị backups bụ nnọọ nnukwu na-aba na ha na-achọ a ibu nchekwa ebe, jide n'aka na ị na-ezuru free ohere na diski ike gị.
Nzọụkwụ 6: Secondary Computer
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla ọzọ na-arụ ọrụ si, biko gbalịa akwado eji ihe ọ bụla ọzọ na kọmputa na ị maara ga-enwe onye nke n'elu mbipụta.
iTunes Movies maka a TV Marathon
Otu iTunes Library na otutu Macs
> Resource> iTunes> Ngwọta n'ihi na iTunes ndabere Oge Okpu